Ikhwalithi ephezulu kanye nentengo yefektri Umakhi wombhoshongo wezinto eziphilayo kanye nefektri | Ukulingisa
Ibhokisi le-deodorization box elime mpo ngombhoshongo webhayoloji
Igama lomkhiqizo: deodorization box
Imodeli yomkhiqizo: ongakukhetha
Usayizi womkhiqizo: ukwenziwa ngokwezifiso
Impompo yamanzi: 5.5kw
Ukwelashwa ivolumu yomoya: 10000m3 / h
Izinto: pp-a - 8 / mm
Ububanzi besicelo: ukwelashwa kwephunga lokuhlanza igesi yemfucuza evela esiteshini sendle, isiteshi sikadoti, ithangi lamanzi angcolile, ifektri yokuphakelayo, ipulazi lokuzalisa, ifektri yenjoloba, ifektri yepulasitiki, njll.
Ibhokisi lokususa ukonakala kwezinto eziphilayo lithatha isakhiwo se-FRP, ngokusebenza okuphakeme kokulwa nokugqwala nobuqotho obuqinile, obulungele ukuthuthwa nokufakwa; Lapho ukwandisa umthamo wokucubungula, udinga kuphela ukufaka izinto, okulula ukuzisebenzisa; Kubuye kube lula ukwelashwa okuhlukile ngaphansi kwesimo sokusakazeka komthombo wegesi.
Isimiso: sebenzisa isendlalelo sokupakisha se-biological esihlanzekile ukuhlakulela ama-microorganisms awusizo angabola izingxenye zephunga legesi ezingeni lokushisa elifanele. Izici zethangi le-deodorization etholwe yinkampani yethu ikakhulu zifaka ukulawulwa komthombo nokuqoqwa komthombo wokungcola, ukwakheka kwepayipi legesi elingcolile, isigaba se-pretreatment, ukukhishwa kwe-adsorption kanye nokubola komzimba wombhede othile webhedi yama-bacterium deodorization, isigaba se-adsorption esithuthukisiwe kanye nohlelo lokungcolisa. Ngemuva kokuthi igesi lephunga lilawulwe ngempumelelo, liqoqwe futhi lidluliselwe ohlelweni lokwelashwa ngomthombo, Ngemuva kokwelashwa kwangaphambili, kudalwa indawo efanelekayo yokuqothulwa kwemvelo, bese kuthi amabhaktheriya athile ahlukaniswe nokubola. I-pure biomass strain carrier filler isetshenziselwa ukunikeza ukudlala okugcwele endimeni yamagciwane athile ngenkathi ihlangabezana nezimo zenqubo yokwelashwa, ukuze ukungcola okuqondisiwe kungabola ngempumelelo futhi kususwe, ukuze kuzuzwe inhloso yokwelashwa ngephunga.
Izinsiza kusebenza zebhokisi le-FRP deodorization: ubuchwepheshe bokulawula ukusingathwa kwemvelo okusebenzayo. Umzimba wethangi lokuhlunga ojwayelekile usebenzisa izinto ezihlanganisiwe futhi uyisakhiwo esivaliwe, esiqinisekisa ngempumelelo ukuzinza kokushisa kwemvelo yokusebenza kwama-microorganisms; Ezindaweni ezibandayo, ifakwe uhlelo lokushisa; Uhlelo lokufafaza lusethelwe ukufafaza i-filler yezinto eziphilayo ukuqinisekisa umswakama wokugcwaliswa kwezinto eziphilayo; Ukuphathelene nokugcwalisa ubuchwepheshe be-anti acid. Ukwakheka okuhlanganisiwe nefomu eliguquguqukayo. Isakhiwo esezingeni sisebenzisa ukwakheka okuhlanganisiwe nokwenziwe ngendlela efanele kanye nesakhiwo esihlanganisiwe; Isakhiwo singalungiswa ngokuya ngokuhlala komhlaba nemvelo, njengokungcwatshwa, ukuhlukaniswa, okunemigangatho eminingi, njll, okuguquguqukayo futhi okuguqukayo; Izinto zedivayisi zingaba ngokuya ngezidingo zomsebenzisi. Iphunga (ikakhulukazi i-NH3 ne-H2S) lenziwa ngesikhathi kulashwa isitshalo sokuhlanza indle nesitshalo sokulahla udoti. Iphunga elenziwa yiyunithi ngayinye yokwelashwa yesikhungo sokuhlanza indle liqoqwa ngomsele womoya bese lifakwa emishini yokuqeda uketshezi ukuze yelashwe. Isisetshenziswa sokuqeda uketshezi sigeza iphunga ngandlela thile nangenye indlela, futhi ukusebenza kahle kokususa kungaphezu kwama-95%. Imishini yokwelapha iphunga le-FRP ihloselwe ikakhulukazi amafektri okudla inyama kanye nabakhiqizi bomanyolo, i-Odor (ikakhulukazi i-NH3 ne-H2S) ekhiqizwe ngenkathi kulashwa isitshalo sokuhlanza indle nesitshalo sokulahla udoti. Iphunga elenziwa yiyunithi ngayinye yokwelashwa yesikhungo sokuhlanza indle liqoqwa ngomsele womoya bese lifakwa emishini yokuqeda uketshezi ukuze yelashwe. Isisetshenziswa sokuqeda uketshezi sigeza iphunga endleleni, ukusebenza kahle kokususa kungaphezu kwama-95%, futhi kuthumela igesi ehlanzekile emkhathini ukuhlangabezana nezinga lokuvikelwa kwemvelo.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngethangi lokususa ukonakala kwezinto eziphilayo kanye nokwelashwa kwegesi kadoti ngombhoshongo wokuvikela imvelo umbhoshongo wezinto eziphilayo, sicela uxhumane nathi.
Langaphambilini Kuvulwe umshini wekhabhoni ohlanganisiwe
Olandelayo: Imishini yokwelashwa kwegesi yemfucuza isiphepho
Imishini yokunakekelwa kwegesi kadoti esebenza kahle ...